Qorsheynta ka soo horjeedka 'Retargeting'
Monday, June 11, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaad ogaan kartaa ka dib markaad booqato degel gaar ah inaad bilaabayso inaad ku aragto xayaysiisyada barta kale ee ku saabsan iyaga iyo inbadan. Maaha wax iska yimid. Nidaamyada sida Google Adwords waxay adeegsadaan a cookie-saddexaad taasi waxay u suurta gelineysaa inay arkaan markay booqdaan barta xayeysiistaha ka dibna ay ku raacaan adiga oo booqanaya boggaga kale xayeysiis. Dib-u-habeynta ayaa ah mid guuleysata waxayna u horseeddaa sicir baddal sarreysa oo leh kharashyo yar guji kasta. Ka hubi a mushahar ku bixi halkii xirfadle hadaadan ka faa iidaysan.
Waxa aanad ogaan karin, in kastoo, ay jiraan inay sidoo kale jiraan farsamooyin lagu garto baraha dadku u egyihiin inay booqdaan kahor intaysan imaan kaaga. Tan waxaa lagu magacaabaa Pretargeting waxaana lagu sharraxay boggan infographic-ka ah ee 'Pretarget'. Si kale haddii loo dhigo, haddii dadku booqdaan boggag gaar ah ka hor intaanay imaan goobtaada, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ogaato waxa degelladaasi yihiin oo ku xayeysiiyaan.
Tags: infographicpretargetsii diyaarintadib-u-celinta